Thumela imibhalo yomuntu siqu ku-Kindle wakho | Onke ama-eReaders
Okokufundisa: Thumela Amadokhumenti ku-Kindle Yakho Ukuwafunda Kamuva
Enye ye izinzuzo ezinkulu zamadivayisi we-Amazon Kindle uma kuqhathaniswa namanye amadivayisi emakethe ukuthi kuvumela ukuthunyelwa kwemibhalo ngenethiwekhi ye-WiFi ukuthi ikwazi ukuwathola ngesinye isikhathi lapho sinesikhathi esithe xaxa noma ukuthula okuningi kwengqondo nokugcinwa kwephepha okulula lokhu engicabanga ukuthi .
Hoy usebenzisa lesi sifundo esilula esinesihloko esithi: Thumela amadokhumenti ku-Kindle wakho ukuze uwafunde kamuva, sifuna ukukukhombisa ukuthi uwusebenzisa kanjani lo msebenzi othakazelisayo futhi lokho kuvame ukungaziwa kubanikazi abaningi be-Kindle.
Noma ngubani obhalisa i-Kindle nge-Amazon uthola ikheli elihlukile le-imeyili eligcina ku- @ kindle.com lelo ivumela ukuthunyelwa nokwamukelwa kwama-imeyili kepha futhi ivumela ukufinyelela kweminye imisebenzi njengokuthumela amadokhumenti ku-Kindle wakho kusuka kunethiwekhi ye-WiFi ukuwafinyelela ngesikhathi esikahle.
Ngalo msebenzi ungathumela amafayela afinyelela kuma-50 mb nakumafomethi ahluke kakhulu futhi ahlukahlukene; IZwi (i-doc, i-docx), i-html, i-rtf nokuthi kungenzeka kanjani ukuthi ibe ngenye indlela amafomethi wohlobo oluthile (mobi, azw). Kungenzeka futhi ukuthumela izithombe ngamafomethi: jpeg, jpg, gif, png ne-bmp.
Imininingwane eyodwa i-Amazon ebikade icabanga ngayo ukuthi kungenzeka yini ukuthi sigadle imeyili yethu ngogaxekile abazondwayo futhi ngalokhu kuyadingeka ukuqinisekisa ikheli lekomeli futhi kukhawulele nemibhalo engama-25 engathunyelwa ngasikhathi sinye namakheli e-imeyili ayi-15 okungathunyelwa kuwo umbhalo.
Lapho imibhalo seyitholakele ngeposi lethu ngekheli le-imeyili, ifakwa ngokuzenzakalelayo kulabhulali yethu lapho izohlala khona size siyisuse. Le mibhalo iphathwa ngokufana nencwadi futhi izosivumela izinketho ezifanayo nama-eBooks.
Izinyathelo zokuthumela idokhumenti ku-Kindle yethu:
Okokuqala kufanele bhalisa i-Kindle yethu bese ufinyelela esikrinini sokumisa lapho ungathola khona ikheli lakho le-imeyili elenziwe ngezifiso
Ngemuva kwalokho kuzofanela ubhale i-imeyili kukheli lakho le-Kindle nedokhumenti enamathiselwe. Lokhu kungenziwa kusuka noma yikuphi, ikhompyutha, ithebhulethi, i-smartphone noma kwenye indawo
Osekusele ukuthumela i-imeyili futhi izotholakala vele kumtapo wezincwadi we-Kindle yethu lapho sivula idivayisi
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi kuyadingeka ukuthi uvume i-akhawunti ye-imeyili lapho imibhalo ithunyelwa khona ku-Kindle ngoba uma kungenjalo ngeke itholwe.
Ngabe bewazi inketho yokuthumela amadokhumenti ku-Kindle yakho? Ngabe uyayithola ithakazelisa?.
Imininingwane engaphezulu - Okokufundisa: Yenza kusebenze Isipele Somusa
Umthombo - Amazon.com
Indlela ephelele ye-athikili: Onke ama-eReaders » izinkampani » Amazon Kindle » Okokufundisa: Thumela Amadokhumenti ku-Kindle Yakho Ukuwafunda Kamuva
Iqiniso elithandekayo ongaphawulanga ngalo kungenzeka ukuguqula imibhalo esiyithumela kwifomethi ehambelana ngokuphelele. Iwusizo kakhulu ekufundeni ngokunethezeka kwama-PDF. Vele ubhale igama lokuguqula ngesihloko se-imeyili.
Sawubona Monica !!
Siphawule ukuthi imibhalo ethunyelwe inezinketho ezifanayo nezama-eBooks nalokho ebesifuna ukukusho kakhulu noma okuncane ozokusho kodwa mhlawumbe bekufanele ngabe sikuchaze kangcono.
Ngiyabonga ngemibono yenu !!
Sawubona, ngine-Kindle futhi ngifuna ukuthola incwadi engiyithunyelwe ngumuntu engifunda naye ekilasini lami. Ungitshela ukuthi kufanele ngibe nekheli likaKinle kodwa ngiye kuzilungiselelo futhi akasho lutho. Ungangisiza?
I-Telefónica ne-Circle of Readers zakha i-Nubico
I-Unusual Sapiens, i-eReader yaseSpain ngentengo ethokozisayo